Etu esi eme mkpebi nke afọ ọhụụ na ọrụ | Martech Zone
Afọ ọhụrụ fọrọ ụbọchị abụọ. Kwa afọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị America niile na-eme Mkpebi Afọ Ọhụrụ, ma ọtụtụ anaghị edebe ha. Anyị na-eji mmalite nke kalenda ọhụụ iji gbalịa ịkwalite mgbanwe dị egwu, mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile. Ọ bụ ya mere na-ekwu okwu banyere Etu esi emeghi mkpebi ohuru bụ emume izizi nke afọ n’afọ 2010 Production Production Series nke Sla Sla Development weputara. (Nọgidenụ na-agụ maka ego ego pụrụ iche!) Enwere ụzọ ka mma iji setịpụ ma zute ihe mgbaru ọsọ, ọkachasị gbasara otu ị si eji teknụzụ azụmaahịa iji kwalite azụmahịa gị na akara gị.
Tydị Ebumnuche Atọ
Isi ihe kpatara na anyị anaghị edebe mkpebi afọ ọhụrụ anyị bụ maka na ha mejupụtara ebumnuche na-ezighi ezi. Tụlee isi ihe mgbaru ọsọ ndị a:
Ihe Mgbaru Ọsọ - Ọ bụrụ na afọ ọhụrụ gị mkpebi bụ “banye n'ime udi” ma ọ bụ “-Eto eto azụmahịa gị”, eleghị anya ị na-agaghị aga nke ọma. Nke ahụ nwere ike ịdị mma na akwụkwọ mana kedu ka ị ga-esi mara ma ị na-enwe ọganiihu? Kedu ka ị ga-esi mara mgbe i mechara ihe a?
Ihe Mgbaru Ọsọ - Ọtụtụ mgbe mkpebi afọ ọhụrụ anyị na-adabere na Nsonaazụ. Ọmụmaatụ, ị nwere ike kpebie ka "ida iri abụọ pound" ma ọ bụ "dịkwuo ahịa site 25%." Ihe ndị a dị mma karịa ebumnuche na-edoghị anya n'ihi na enwere ike ịtụ ha, mana ọnọdụ ndị na-enweghị ike ịchịkwa anyị na-emetụta ya. Nhazi ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ ihe gbasara ọrụ karịa nsonaazụ.
Usoro Mgbaru Ọsọ - Ndị a bụ ụdị ebumnuche kachasị mma n'ihi na ha na-amata ihe ị bụ chọrọ ime. Ha na-adabere na mgbalị karịa ka ha na-enwe na ohere. Tụlee mkpebi ahụ bụ́ 'ịrụpụta ihe ugboro anọ n'izu' ma ọ bụ 'iru ihe atọ dị mma kwa ụbọchị.' Enwere ike ịme nrọ ndị a site na ịrụsi ọrụ ike. Chọghị metabolism gị ma ọ bụ ahịa iji kwado.
Mgbaru ọsọ na Azụmaahịa na Teknụzụ
Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ dị egwu iji setịpụ ihe mgbaru ọsọ maka iji ahịa na teknụzụ gị eme ihe n'afọ ọzọ. Emela mee mkpebi gị:
Mee ka akwukwo ozi mepee site na 10%
Ugboro abụọ m na-eso ụzọ RSS
Zụlite mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike maka ngwaahịa flagship
Kachasị iji ojiji WordPress
Ebumnuche ndị a bụ adịghị mma ma obu kwa nsonaazụ gbakwasara. Kama, gbalịa gbanwee ha na nsụgharị ndị a, nke na-elekwasị anya na usoro ị ga-eji n'ọdịnihu:
Mee nyocha A / B iji gbalịa imepụta akwụkwọ akụkọ ọhụụ
Mee ka usoro nyocha RSS dị mma
Gbalịa crowdsourcing ọhụụ ọhụrụ
Debe oge iji amamihe jiri nlezianya nyochaa ihe mgbakwunye WordPress m ugbu a
Nwere mmasị ịmụtakwu banyere Mkpebi Afọ Ọhụrụ na Teknụzụ? Debanye aha maka “EBEGH NOT Iji Mee Mkpebi Afọ Ọhụrụ na Ọrụ” na Wednesde, Jenụwarị 6 @ 2:00 PM n’ebe a na Indianapolis. Mmadụ anọ mbụ debanyere aha na ntanetị na koodu ego MKPGTECH ga-enweta ego mbelata! Banye taa!
Copernicus ma ọ bụ Aristotle ọ na-azụ ahịa gị?